Khilaafkii uu Qolka Labiska Ka Buuray, Booqashadii Uu Barcelona Ugu Laabtay, Kaadhkii Casaanka Ahaa Ee La Siiyay Iyo Todoba Arimood Oo Soo Koobaya 100-kii Maalmood Ee Ugu Horeeyay Ee Uu Neymar PSG Ka Tirsanaa. – WWW.Gool24.net
Khilaafkii uu Qolka Labiska Ka Buuray, Booqashadii Uu Barcelona Ugu Laabtay, Kaadhkii Casaanka Ahaa Ee La Siiyay Iyo Todoba Arimood Oo Soo Koobaya 100-kii Maalmood Ee Ugu Horeeyay Ee Uu Neymar PSG Ka Tirsanaa.
Neymar Junior ayaa dhameystay 100-kii maalmood ee ugu horeysay nolosha kooxda Paris Saint Germain, wuxuuna noqday saameyn dhinacyo kala duwan ah ku yeesha kooxda tan iyo markii uu a duun dhan 222 Malyan oo Euro ugu dhaqaaqay Barcelona.
Todoba arrimood ayaa lasoo calaameeyay taasoo cadeyn u ah inuusan xidiga wali si fiican u sal dhigan magaalada Paris, waxaana soo baxaya warar sheegaya inuu xidigaan ka qoomameynayo ku biiritaanka Paris Saint Germain – walow uu ku adkeysanayo inuu si weyn ugu faraxsan yahay.
Marcelo Bechler oo ahaa wariyihii ugu horeeyay ee ogaada go’aanka Messi uu kaga tagayo kooxda Barcelona – ayaa dareensan inuu Neymar si weyn uga qoomameynayo ku biirista Parc des Princes.
Haddaba aan eegno todobad arrimood ee laga soo calaameeyay 100-kiisii maalmood ee ugu horeeyay nolosha Paris Saint Germain.
1. SOO BANDHIGISTIISII PSG:
Neymar Junior isagoo dhinac taagan madaxweyne Al-Khelaifi ayaa lagu soo bandhigay kumanaan taageerayaal PSG ah hortooda waxaana lagu soo bandhigay Eiffel Tower.
“Waxaan doonayaa tartan cusub iyo inaan PSG ka caawiyo iney qorto taariikh. uma imaan halkaan inaan noqdo xidig” ayuu yiri Neymar Junior. Si kastaba xidiga reer Brazil bandhigiisa wuxuu yimid ka hor kulankii ay PSG la ciyaaareysay Amiens.
2. KULANKIISII UGU HOREEYAY EE PSG
Neymar Junior waxaa ugu dambeyn loo ogolaaday inuu u ciyaaro Paris Saint Germain waxey guul ka heleen Guingamp madama aad la isugu qabsaday arintiisa. wuxuu dhaliyay gool sidoo kalana laba gool kale ayuu ka qeyb qaatay.
3. DHALEECEYNTA MAAMULKA BARCELONA:
Neymar ma uusan iloobin Barcelona iyo saaxiibadii wacnaa oo uu ku lahaa qolka labiska, balse wuxuu qiray in Barcelona ay u baahan tahay maamul ka wanaagsan midka hadda haya, isagoo aad u muujinaya go’aankii uu kaga tagay iney arintaas salka ku heysay.
4. ISKU DHICII EDINSON CAVANI EE REKOODHE TUURISTA:
Qolka labiska Paris Saint Germain waxaa ka jiray jawi fiican, balse wuxuu soo afjarmay markii ay Neymar & Cavani isku qabsadeen gool ku laad iyo laad xor ah intii ay socotay ciyaar ay guul ka heleen Lyon. Cavani ayaa ku mayal adeegay inuu tuuro, wuxuuna qasaariyay, waxeyna aheyd arin la hadal hayay dhaw isbuuc ka hor inta aan la iloobin.
5. CASAANKII MARSEILLE:
Neymar Jr kama uusan baaqsan inuu ka falceliyo beegsigii ay ku sameeyeen ciyaartoyda Marseille, waxaana laga saaray garoonka markii uu ku gardarooday Lucas Ocampos oo qalad ka galay ka hor inta uusan garsoorka soo gaarin agtooda, wuxuuna ka baxay garoonka isagoo dhaliyay gool kaarka casna horay u qaatay.
6. SAAXIIBTINMADA SUAREZ & MESSI
Neymar Junior ma uusan qarin xiriirka saaxiibtinimo ee kala dhaxeeya Messi iyo Suarez, isagoo dhawr jeer soo booqday xerada tababarka kooxda Barcelona. laba jeer ayuu yimid tan iyo markii uu ku biiray kooxda Paris Saint Germain.
7. ILMADII JIMCAHA EE UU SHIRKA JARAA’ID KU DHEX OOYAY:
Neymar Jr wuxuu awoodi waayay inuu kusii jiro shirkii jaraa’id oo uu kula midoobay macalinka qaranka Brazil Tite kadib guushii Japan ee jimacahii kadib markii su’aalo badan oo ku saabsan inuusan ku faraxsaneyn kooxda Paris la weydiiyay wuxuuna si caro leh uga jawaabay isagoo leh: “Qof walba wuxuu iska abuuranayaa sheeko aniga igu saabsan, waxba dhibaato ah kuma qabo macalinka iyo Cavani. wararka la sheegayo waa been abuur”